Ozbekistana: Kajikajy tamin’ny fifidianana parlemantera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 4:17 GMT
Araka ny efa nampoizin'ireo manam-pahaizana samihafa, nankatoavina ny fifidianana solombavambahoaka tany Ozbekistana. Namoaka izany vaovao izany ny filohan'ny Vaomiera Misahana ny Fifidianana, Mirza-Ulugbek Abdusalomov ny harivan'io andro io ihany (27 desambra), ary nanampy fa mpifidy 15.108.950 na 87,8% tamin'ireo mpifidy voasoratra anarana no nandray anjara tamin'ny fifidianana ary araka ny voalazan'ny andininy faha 44 ao amin'ny Lalàna mifehy ny fifidianana ao amin'ny Oliy Majlis, ara-dalàna sy tsy azo iadian-kevitra izy ireo.
Nanoratra momba ireo fitsapan-kevitra isan-karazany ny neweurasia ary misy iray manokana avy amin'ny sampam-pahalalaham-baovao mpomba mahafatra-po ny governemanta Ozbeka, Uzniform.
Fitsapan-kevitra antserasera, natao nandritra ny faran'ny volana Oktobra sy tamin'ny folo andro voalohany tamin'ny volana novambra nanontany ireo namaly raha “…mahafantatra izy ireo fa hotontosaina ny 27 desambra  ny fifidianana ao amin'ny parlemanta Oliy Majlis sy ny faritra, distrika ary ny tanànan'i Kengashes an'ny solombavambahoaka?
Tamin'ireo 159 nandray anjara tamin'ny fanadihadiana, 82 (51,6%) no namaly “TSIA”; 12 (7,5%) no nahita fahasarotana tamin'ny famaliana izany fanontaniana izany; ary 65 (40,9%) ihany no namaly hoe “ENY”.
Tsy raisiko avy hatrany ho ankapobeny izany saingy… Raha heverintsika fa fitsapan-kevitra fotsiny manontany raha fantatr'izy ireo ny hisian'ny fifidianana parlemantera ho avy dia tsy midika ny fikasan'izy ireo handray anjara amin'ny fifidianana izany.
Nilatsaka izany hevitra izany rehefa avy nanamarina ny vokatry ny fitsapan-kevitra hafa nataon'ity sampam-pampahalalam-baovao ity ihany izay nangataka ny olona mba hanombatombana “… manombana ny asa amin'izao fotoana izao ao amin'ny parlemantan'ny Oliy Majlis?”. Tamin'ireo 171 namaly, antsasany mahery (89, na 52%) no namaly hoe “RATSY”; mpandray anjara 15 (8,8%) kosa namaly hoe “Ratsy kokoa noho ny tsara”; 41 tamin'ireo mpandray anjara kosa nilaza ny “Tsara” sy ny “Tsara kokoa noho ny ratsy”, izay mameno ny 24% amin'ny valinteny rehetra.
Ny lahatsoratry Ferghana.ru” mitondra ny lohateny hoe “Fifidianana parlemantera natao tany Ozbekistan” dia nahitana hevitra maro samihafa avy amin'ireo namaky azy.
максим (maksim) nilaza fa “voatery nandray anjara tamin'ny fifidianana ny renibeny satria nolazaina taminy fa raha tsy mandray anjara izy, dia aorian'ny taona vaovao vao azo alaina ny vola fisotroan-drononony ho an'ny volana janoary.” Tsy misy olona tsy te hanam-bola amin'ny alin'ny taombaovao, mba hihaona sy “hankalaza” izany miaraka amin'ny sakafo hariva kely amin'ny fety. Noho izany, tsy maintsy nandeha ilay vavy antitra ary “nandray anjara” tamin'izany fampisehoana an-tsehatra izany.
Romotra i Che Lovek (midika hoe Olombelona), mpandray anjara mavitrika amin'ny fifanakalozan-dresaka satria nandeha handrotsa-bato hanohitra ny rehetra saingy tsy afa-nahita izany safidy izany. Namaly ny namany Dionis: “Satria tsy nahita ny safidy ‘manohitra ny rehetra’ izahay, dia nofenoiko ny banga tamin'ny kandidà rehetra.” Midika izany fa tsy nahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanisam-bato ny vatony ary nesorina ho tsy manan-kery tamin'ny fanisana.
Na inona na inona miseho ao an-tsain'ny olom-pirenen'i Ozbekistana, nankatoavin'ireo mpanara-maso iraisam-pirenena ho “demaokratika sy misokatra” ny fifidianana. Matetika ny politika tena matotra tsy miraharaha ny tena toe-draharaha ary mandinika ny zava-mitranga amin'ny alàlan'ny fijery ny tombontsoam-pirenena.
Sary natolotr'i Uza.uz: Ny filoha Karimov nandray anjara tamin'ny fifidianana tamin'ny 27 Desambra.
Navoaka avy amin'ny neweurasia.net.